Mpanamboatra sy mpamatsy mpampifandray China 34 sy 4 | Chapman
✭ Ny mpampitohy dia proxy na fonosana manodidina API iray izay mamela ny serivisy ifotony hiresaka amin'ny Microsoft Power Automate, Microsoft Power Apps, ary Azure Logic Apps. Manome fomba ahafahan'ny mpampiasa mampifandray ny kaontiny sy manararaotra andiana hetsika efa voaomana ary mitarika amin'ny fananganana ny fampiharana sy ny fizotrany.
✭ Ny ampahany marina amin'ny plastika dia avo dia avo, ary ny toerana mifanandrify dia mila atao ao anatin'ny fandeferana 0.01-0.02mm. Ny fitaovany dia fitaovana LCP fireproof V0.
✭ Ity vokatra ity dia mila novokarin'ny milina fanosorana haingam-pandeha haingam-pandeha, miaraka amin'ny tsingerin'ny tsindrona fohy ary ny fahamendrehan'ny vokatra avo lenta. Ny tsindrona tsindrona dia tokony fehezina ao anatin'ny 15-25 segondra mba hahazoana antoka fa mifanaraka ny haben'ny vokatra.
✭ Ny fepetra takiana amin'ny bobongolo dia avo dia avo ihany koa, ary ny toeran'ny seranan-tsambo fampifandraisana vokatra dia tokony hatao amin'ny sisin-dafitra misaraka, ary ny fandeferana isaky ny fampidirana dia tsy maintsy azo antoka ao anatin'ny refy mandefitra 0,005mm.
Bobongolo No. CPM-150220
Fitaovana plastika LCP
Ampahany lanja 3.5g
Part size 48.00 * 14.1 * 8.2 mm
Haben'ny bobongolo 250 * 300 * 321mm
Anaran'ny ampahany Mpampitohy 34 sy 4 pin
Rongony bobongolo 1 * 4
Bobongolo fitaovana S136 / S50C / S-7
Fotoana tsingerin'ny bobongolo: 16 ny
1.Contact dia masinina avy amin'ny firaka varahina mafy sy volamena nopetahany ；
2.Couplers sy ny vatan'ny fitoeram-baravarana dia misy amin'ny alimina anodized, nylon na vy tsy misy vy ；
3.Plug dia novolavolaina tamina tariby malefaka kokoa hananganana fananganana iray ；
4. Ny plugs dia misy peratra fikomiana vy izay misoroka ny fahasimban'ny fingotra ary mampitombo ny fanoherana pull
5.Receptacles dia nopetehina ao anaty akorandriaka misy epoxy kilasy elektrika ；
6.Malins pins dia misy tombo-kase bosoa miorim-paka eo am-pototry ny fifandraisana tsirairay izay manome toky fa mety ho be loatra sy vovoka tery ny volo rehefa ampiasaina ny singa ；
7.Mba hiantohana ny fampifanarahana mety rehefa mandray singa lahy sy vavy ；
8.Nitatra ny pin ny tany izay manome toky ny fifandraisana azo antoka amin'ny herinaratra satria io no pin voalohany tokony hiditra ary farany misintaka ；
Ny Connectors sy ny tadiny dia tsy hikorontana na hihena amin'ity tontolo iainana maripana ity.
Previous: Fitaovana fandrefesana mari-pana
Manaraka: Saron-damosin'ny lamosina
Famonoana familiana servo kely mazava tsara